10/03/2018 admintriatra Tresaka 0
Namory olona tany Ambilobe i Andry Rajoelina ka narangarany tamin’izany ny lakile be mitovy tamin’ilay natolony ho an’ny filoham-pirenena nandritra ny fifamindram-pahefana ny taona 2014. Zavatra roa no azo andika iny fihetsiky ny filohan’ny HAT iny ary mikasika izany no lohahevitra entina androany.
Zavatra roa no azo andika ny fihetsiky ny filohan’ny HAT tamin’ny fanehoana ilay lakile be tany Ambilobe. Voalohany, efa tamin’ny fotoana nanaovana ny famindram-pahefana izany i Andry Rajoelina no efa namitaka ny filoham-pirenena satria nanaovany dika mitovy ilay lakile mody nasehony ho hitan’ny be sy ny maro. Izany dia midika fa nikasa ny hitàna andriakitra goavana tamin’ity fitondrana Rajaonarimampianina ity mihitsy ny tenany saingy rehefa tsy izay ny zava-nitranga dia izao miampanga ny filoha no mpamitaka izao.
Faharoa manaraka izany, nasehon’i Andry Rajoelina tamin’ny mponina tany Ambilobe fa any aminy ny lakile manokatra ny varavaran’ny fanonganam-panjakana, tahaka ny nitranga ny taona 2009. Iny ilay “lakile-pasana” hampiditra ny firenena anaty loza tsy roa aman-tany. Aza adinoina fa teo ambony rà mandriaka sy faty olona no niorenan’ny fitondrana HAT notarihan’i Andry Rajoelina sy ny MAPAR ary ny TGV. Nisokatra nidanadana mihitsy ny varavaram-pasana nandritra iny fanonganam-panjakana ny taona 2009 iny. Nandritra iny “coup d’Etat 2009” iny no nahitana aina nafoy be indrindra hatramin’izay nisian’ny krizy teto amin’ny firenena, maherin’ny 500 ireo maty raha tsy hiresaka afatsy ny 26 Janoary 2009 fotsiny ihany.
Tsy misy dikany amin’i Andry Rajoelina tokoa izany aina nafoy sy rà latsaka izany ary hainy mihitsy aza ny nilalao ny tsinaim-bahoaka nandrombahany fahefana. Tsy misy fotony aminy izany rehetra izany fa ny fahefana sy ny seza ihany no zava-dehibe aminy dia iny efa narangarany iny sahady ilay “lakile-pasana” fototra niorenan’ny fitondrany ary mbola heveriny fa hamerina azy eo amin’ny fitondrana indray. Ny efa nandatsa-drà tsy afaka miala amin’izany intsony ary tsy maintsy amin’ny alalan’ny rà latsaka hatrany no hahatratrany ny tanjony.
Asa fa tsy kabary hiatrehana ny ho avy hahatsara ny fiainam-bahoaka, io no imasoan’ny governemanta taorian’ny fivoriana “ Team Bulding” izay notanterahina tany Mantasoa, noho izany dia nodinihina teo anatrehan’ ny filankevitry ny governemanta omaly ...Tohiny